Izitayela Eziyi-7 Zokugunda Izinwele Ezimangalisa Kwabesifazane zango- – SL Raw Virgin Hair LLC.
Usulungele ukugunda izinwele okusha? Nazi izitayela ezi-7 zokugunda izinwele ezimangalisayo zabesifazane zango-2022 ongakhetha kuzo ukugunda kahle (ikakhulukazi uma ufuna ukugqoka iwigi).
Feb 28, 2022 | SL Raw Virgin Hair
Sibuze Umsunguli wethu Nomculi Wezinwele Osaziwayo, u-LeAna McKnight, ukuthi ubecabangani ngokugunda izinwele alindele ukuthrenda kuzo ngo-2022.
Usinikeze lezi zindlela eziyisikhombisa futhi sahamba senza ucwaningo oluthile ukuze sibone ukuthi izintokazi zicabangani. Futhi esikutholile ukuthi lokhu kusikeka kuzobe kuthrenda ngempela ngenxa yezizathu ezahlukahlukene. Ukubukeka, umuzwa, kanye nesasasa elijwayelekile lezinto ezinkulu ezizayo ngo-2022.
Ngakho, nazi ezingu-7 zezinwele ezimangalisa kakhulu abesifazane abazicelayo ngo-2022.
Futhi ungakhathazeki, sizokutshela ukuthi ungafinyelela kanjani ukubukeka okufanayo ngewigi uma ungakakulungeli ukufaka isikelo noma iziqeshana ezinweleni zakho okwamanje (noma ungafuni).
Futhi njengomhlahlandlela ongeziwe wokukusiza unqume ukuthi yikuphi ukugunda ongakuthola, bheka okuthunyelwe kwethu kokuthi uhlukanisa izinwele zakho ngokuvumelana nesimo sobuso bakho .)
Izinwele Eziyisi-7 Zabesifazane Zango-2022
1. Ukugunda izinwele kwe-Shag ngama-Curtain bangs
Okuthunyelwe okwabiwe yi-Gramercy Salon (@gramercy_salon)
Kubukeka kabi uma ufuna. Kuhle kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Uzobona ukugunda izinwele kwe-shag okuningi kakhulu ngama-curtain bangs ngo-2022. Kudalwe ngokurabha izinwele, ukugunda izinwele kwe-shag kunganikeza ukubukeka kwakho ivolumu enkulu, izendlalelo, nokuthungwa. Faka amakhethini amakhethini, bese uthatha lokhu kubheka phezulu kuze kube kushisa.
Awuqiniseki ukuthi ukugunda izinwele kwe-shag ngama-curtain bangs kuzokulingana yini? Zama ama-clip-ins kuqala, ubone ukuthi uthanda kanjani, bese uqhubeke usike. Kodwa okungcono nakakhulu, ungathola i-wig, wenze i-shag cut futhi usike ama-curtain bangs akho futhi ngeke kudingeke uzinikele isikhathi eside ngezinwele zakho. Ngakho-ke, esikhundleni salokho ungavele uzixube uma ufuna ukugqoka izinwele zakho zibe bang.
Uma ungathanda ukugunda izinwele ze-shag ende, iwigi ende enamagagasi ingaba efanelekile.
2. Ukugundwa Kwezinwele Okuhlanganisiwe (nge-bob)
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-LeAna McKnight (@stylistlee)
Ukuze uthole ukubukeka okungcolile nokuhle, ukugunda izinwele okuthungwe yilokho okufunayo.
Ukugunda izinwele okuthungwe ngokwengeza incazelo ezinweleni ngokuhlukana, ubude obuhlukile, nezendlalelo. Kuyindlela enhle yokwenza izinwele ze-bob zakudala zigqame. Ungakwazi futhi ukwengeza amaphuzu entshisakalo ku-bob hairstyle yakho ngalokhu kugunda izinwele okuthungwe.
Ungathola iwigi ye-bob yalesi sitayela noma usike iwigi ende ukuze uthole ukubukeka kwe-bob okuthungwe.
3. I-Straight Collarbone Bob
Uma ufuna ukuba mfushane kodwa ungabi mfishane kakhulu, khona-ke i-collarbone bob eqondile iyindlela enhle yokugunda izinwele okufanele owesifazane azikhethele yona.
Ngokungafani ne-bob yakudala ehlala ngenhla kwehlombe, lokhu kugunda izinwele kuhlala ku emahlombe akho. Kubukeka sengathi u-bob osekhulile futhi ikuvumela ukuba ube namandla okudonsa izinwele zakho zibe umsila wehhashi uma uthanda.
Ngakho-ke, uma uzwa sengathi u-2022 yisikhathi se-chop enkulu, lokhu kusikeka kuwukudlala ngothando, kumnandi, futhi kuwumsebenzi konke ngesikhathi esisodwa. Noma uma ufuna ukusuka ekubukekeni okude uye kokuthile okusha, thatha ithuba ku-collarbone bob. Futhi, uma i-cheekbones yakho ingenye yezici ovele uzithande ngalobo buso bakho obuhle, uzofuna ukuzama i-collarbone bob Umumo ongewona oyindilinga wale cut bob ubhalansisa kahle. ubuso obuyindilinga.
Noma, uma ufuna ukufaka lokhu kubukeka kanye ngesikhathi, ungakwazi ukubalekela lokho nge-bob yezinwele zewigi zemvelo Ungakwazi futhi ukuvuselela amawigi akho amadala anobude obugcwele futhi ubanike impilo entsha ngalokhu kugunda kwe-bob.
4. I-Collarbone Razored Bob
Ukusikwa kwe-bob akudingekile ukuba kukhumbuze ibhizinisi, okuyisicefe, nokubukeka okubukhali.
Uma unquma nge-bob kodwa ungafuni ukubukeka okuqondile, ungakwazi ukuthambisa nge-collarbone rezored feathered bob. Ungaqhubeka uthambisa ukubukeka ngama-curtain bangs. Izendlalelo ezi-razored kanye nokugundwa kwezinwele okucashile kudala inkohliso yokuthungwa okwengeziwe kwezinwele.
I-collarbone razored feathered bob ikunikeza ukubukeka okuhle nokuhle kokubheka thina besifazane abamatasa abafuna ukubukeka okuhle okuphelile ngaphandle komsebenzi omningi. Kodwa futhi iyashintshashintsha njengoba ungakwazi ukwenza isitayela ngama-pin curls noma amagagasi olwandle.
Njengenye yezindlela ezilula zokuvuselela ukubukeka kwakho, akumangalisi ukuthi lokhu kugunda izinwele kwenze uhlu lwango-2022 Kumsunguli.
5.I-Layered Cut Ngokugqanyisiwe
Awulungele ukubukeka okufushane kodwa ufuna ukushintsha isitayela sakho kancane?
Bese ukusika okufakwe izingqimba okunokugqamisa kuyinketho ekahle kuwe Enye indlela yokugunda izinwele eyimfashini ka-2022 esiyibona emkhathizwe ihlanganisa ukusikeka okunengqimba okude, okumaphakathi, ngisho namahlombe okunezithombe ezinhle kakhulu. Ngokugqamisa kobukhulu, umhleli wakho wesitayela angakwazi ukulawula ukuthi ukugqama kuvela kanjani futhi kuphi ukubukeka kwezendlalelo eziningi okuthuthukisa ukusika okunengqimba kwama-tresses. Ukusikwa kwezendlalelo ezithambile futhi ezinde kukunikeza ivolumu eyengeziwe nokuthungwa.
Uma ungathanda ukugqoka iwigi enalokhu kubukeka, qiniseka ukuthi uthola iwigi yezinwele zomuntu engu-100% yekhwalithi ephezulu ongakwazi ukuyifaka umbala, ukuyisika, nesitayela ngaphandle kokuchithwa noma ukulimala kwezinwele. Noma ungakhetha wigi eseyigqanyisiwe kakade, ukuze ungadingi ukudlula inqubo yokufiphala nokufa.
6. Ukugunda izinwele ezinobude obumaphakathi Nezendlalelo Ezi-Shaggy
Okuthunyelwe okwabiwe Izitayela Zezinwele Zakamuva (@latesthair)
Kwabesifazane bethu abanezinwele ezinde, ukugunda kwakho kwezinwele okusemfashinini kwango-2022 kubukeka njengokugunda izinwele ezinobude obumaphakathi okunezendlalelo ezi-shaggy.
Kunokwehluka okumbalwa kokugunda izinwele kwe-shag okumaphakathi. Kodwa noma ukhetha ukuyisika, kuyisitayela esihlukile ukwenza uhlu lwango-2022 lokugunda izinwele oluyimfashini.
Ngesitayela sobude obumaphakathi, uzothola izendlalelo ezibukeka ngokwemvelo ezinomthamo. Futhi uzodinga nje i-curling iron yakho nesifutho esivikela ukushisa ukuze udale amagagasi olwandle azosigcina sinesitayela izinsuku ezimbalwa.
Uma uzobheka ukugqama okumaphakathi usebenzisa iwigi, qiniseka ukuthi iyiwigi enobuningi obungu-150% nangaphezulu Lokhu kuvumela izendlalelo ukuthi zicashe, zithuthukise ukunyakaza, futhi zinciphise ukuthi singakanani isitayela okudingeka usenze.
7. Ukugunda izinwele zika-Bob Blunt
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-𝐀𝐈𝐌𝐄𝐄|𝐇𝐀𝐈𝐑𝐒𝐓𝐘𝐋𝐈𝐒𝐓 (@aimeesummers.hair)>t18>
Futhi ukuhlanganisa izinwele zethu ezingu-7 ezisemfashinini zango-2022 kungenye i-bob-izinwele ezimfishane-ungakhathaleli - i-blunt bob.
Lena i-bob yokugcina yesondlo esiphansi ene-facade yayo eguquguqukayo nebuthuntu eyenza kube lula ukuvele uphume embhedeni uhambe.
Okunye kokugunda izinwele okufushane okuveziwe kokuthunyelwe kwanamuhla, akunalo uhlobo lwezendlalelo.Ngakho-ke, blunt Kubukeka bushelelezi obufanela ukuhlukahluka kobuso, okuhlanganisa nabesifazane abanobuso obuyisikwele, obumise okwenhliziyo noma obuyiqanda.
Futhi, kunjalo, ungafinyelela lokhu kubukeka okufanayo ngewigi. Intwasahlobo yewigi yezinwele zemvelo. Ungakhetha ukuthola i-bob noma ukusika iwigi ende ibe yi-bob. Uma ukugunda, ikhwalithi yezinwele kufanele ibe yinhle ukuqinisekisa ukuthi uthola isitayela ngendlela efanele.
Ikuphi ukugunda izinwele okulindele ngabomvu kulo nyaka?
Ngakho-ke, yebo, ukusikwa kwe-bob kusesesitayelani sika-2022. Izendlalelo zizobonakala ngokugqamile. Futhi uzobona ama-bangs ambalwa.
Okuhle ukuthi uma ungakakulungeli ukuzibophezela ekugundani izinwele, ungafinyelela noma yikuphi kwalokhu kubukeka ngewigi kusuka SL Raw Human Wigs Collection.
NEW Blonde Straight Bob Front Lace Wig
10" - $500.00 12" - $556.00 14" - $616.00
2022 hair trendsBeauty bloggerbeauty trendsblunt bobsBob hair cutshair bloghair cuts for womenhair guideHair talkhair trendshairstyleshairstyling tipshot topicsinstyleshort hairShort hairstyle ideasSL Raw Virgin HairtrendingTrendy haircuts for 2022women hair cuts